Internet ​အ​သုံး​ပြု​နည်း (၁) ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ခေါင်း​စဉ်​ကို ​အ​ရိုး​ရှင်း​ဆုံး​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။ Internet ​ကို ​ခု​မှ​စ​ပြီး ​သုံး​မယ့်​သူ​တွေ​အ​တွက် ​ရည်​စူး​ပြီး ​မ​မိုး​ရဲ့ ​ကိုယ်​ပိုင်​သင်​တန်း (MOE Computer Sale, Service & Training) ​သုံး​တဲ့ note ​များ​နှင့် ​မိုး​ဥာဏ်​စွမ်း​ရှိ​သ​လောက်​လေး​ကို ​ပေါင်း​ပြီး ​မျှေ​ဝ​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်​ရှင်။
Internet ​ဆို​တာ ​က​မ္ဘာ့​နိုင်​ငံ​အ​သီး​သီး ​တ​နိုင်​ငံ​နှင့်​တ​နိုင်​ငံ ​သ​တင်း​အ​ချက်​အ​လက်​များ​ကို ​အ​လွယ်​တ​ကူ ​ပေါင်း​ကူး​နိုင်​သော ​ကွန်​ယက်​ကြီး (Network) ​တ​ခု​ပါ​ပဲ။ Internet Connection ​ကို ​ဘယ်​က​ရ​နိုင်​မ​လဲ? ​အ​မျိုး​အ​စား ​ဘယ်​နှစ်​ခု​ရှိ​လဲ?
Four Types of Internet Connection
​ကြိုး​ဖုန်း​ရှိ​ရုံ​နဲ့ Internet Access Card (​နာ​ရီ​ဖြင့် - ​ဥ​ပ​မာ (၁၀)​နာ​ရီ​ကတ်) ​ဝယ်​ယူ​ပြီး Internet ​ကို ​မိ​မိ computer ​တွင် Modem ​ဖြင့် ​ချိတ်​ဆက် ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​သူ့​ရဲ့ ​ထူး​ခြား​ချက်​က ​ဖုန်း​ပြော​နေ​ရင် Internet ​အ​သုံး​ပြု​လို့​မ​ရ​ဘူး။ Connection ​အ​နှေး​ဆုံး​ပါ။
ADSL ​လိုင်း​ကို​သုံး​မယ်​ဆို​ရင်​လဲ ​ကြိုး​ဖုန်း​ရှိ​ဖို့​လို​အပ်​ပါ​တယ်။ ​သူ​က​တော့ ​ဖုန်း​ပြော​နေ​ရင်း ​အင်​တာ​နက်​သုံး​လို့​ရ​တယ်။ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​မှာ​ရှိ​တဲ့ ​ကြိုး​ဖုန်း​ရှိ​တဲ့ ​အ​ရပ်​ဒေ​သ​တွေ​မှာ ​အင်​တာ​နက်​ဆိုင်​တော်​တော်​များ​များ​အ​သုံး​ပြု​နေ​ကြ​တာ​ပါ။
3. IP Star
IP Star ​က​တော့ ​ကြိုး​ဖုန်း​ရှိ​ဖို့​မ​လို​ဘူး။ ​သူ့​ရဲ့ ​အား​နည်း​ချက်​က​တော့ ​ရာ​သီ​ဥ​တု ​မ​ကောင်း​ရင် ​လိုင်း​ကျ​ပြီ။ ​အ​တွေ့​အ​ကြုံ​အ​ရ ​ပြော​ရ​ခြင်း​ပါ​ရှင်။ ​ဈေး​က​တော့ ​အ​ကြီး​ဆုံး​ပဲ။
4. Broad Band Wireless
Broad Band Wireless ​က​တော့ ​ရန်​ကုန်​မြို့​တွင်း ​လက်​ရှိ ​တော်​တော်​များ​များ ​အ​သုံး​ပြု​နေ​ကြ​ပါ​တယ်။
​ကဲ ​ဒီ​လောက်​ဆို Internet connection ​ကို ​ဘယ်​က​ရ​တယ်​ဆို​တာ ​အ​ကြမ်း​မျဉ်း​သိ​ပြီ​ပေါ့။
Internet ​ကို ​ဘာ​တွေ​အ​တွက် ​အ​ဓိ​က ​သုံး​ကြ​လဲ ?
1. Browsing & How to use Search Engine? (Brower ​နှင့် Search Engine ​ကို ​အ​သုံး​ပြု​ခြင်း)
2. E-mail & Voice-mail (​စာ​ပို့​မယ်၊ ​အ​သံ file ​ပို့​မယ်)
3. Chatting & Vedio chatting
4. Download & Upload
​စ​တာ​တွေ​အ​တွက် ​အ​ဓိ​က ​သုံး​ကြ​ပါ​တယ်။ ​မ​မိုး​တ​ခု​ဆီ ​ပြန်​ရှင်း​သွား​မယ်​နော်။ ​အ​ခေါ်​အ​ဝေါ်​လေး​တွေ ​သိ​ဖို့ English ​လို ​ကြား​ညှပ် ​သုံး​သွား​ပါ​မယ်။
1. Browsing & How to use Search Engine?
- Browsing (Browser ​အ​သုံး​ပြု​ခြင်း)
Browser ​ဆို​တာ ​ဘာ​လဲ?
Browser ​ဆို​တာ Interent ​ကို ​စ​ပြီး ​အ​သုံး​ပြု​မယ့် window ​ဆို​ရင်​လဲ ​မ​မှား​ပါ​ဘူး။ Browser ​တွေ​က OS (Operating System) ​တင်​လိုက်​တာ​နဲ့ ​တ​ခါ​တည်း​ပါ​တတ်​တယ်။
​ဥ​ပ​မာ (IE - Internet Explorer)
Browser ​အ​မျိုး​အ​စား​လေး​တွေ ​လက်​လှမ်း​မှီ​သ​လောက် ​ပေး​သွား​မယ်​နော်။
3) Mozilla Firefox (​ဒါ​လေး​ကို​တော့ ​တော်​တော်​များ​များ ​သိ​ကြ​မယ်​လို့​ထင်​ပါ​တယ်)
8) Chromium (for Linux)
9) Orca ... ​အ​များ​ကြီး​ရှိ​ပါ​သေး​တယ်။ Browser ​အ​သုံး​ပြု​နည်း​ကို ​မ​မိုး ​သီး​သန့် Ebook ​လုပ်​ပြီး ​တင်​ပေး​ပါ့​မယ်။
- How to use Search Engine?
Search Engine (​ရှာ​ဖွေ​ရေး ​ယ​န္တ​ယား​ကြီး​ပေါ့) ​တွေ​ကို Internet ​မှ ​စာ​များ၊ ​သီ​ချင်း​များ၊ ​ပုံ​များ၊ ​မြေ​ပုံ​များ၊ ​ဗီ​ဒီ​ယို file ​များ၊ Software ​များ​ရှာ​ဖွေ​ရန် ​အ​ဓိ​က​အ​သုံး​ပြု​ကြ​ပါ​တယ်။ Search Enging ​တွေ​မှာ Search Box (​ရှာ​ဖွေ​ရေး ​သေ​တ္တာ) ​တွေ​ပါ​တယ်။ ​၎င်း Search Box ​မှာ ​မိ​မိ​နှစ်​သက်​ရာ ​ဘာ​သာ​စ​ကား​ဖြင့် ​ရိုက်​သွင်း​ပြီး ​ရှာ​ဖွေ​နိုင်​ပါ​တယ်။ Search Enging ​အ​သုံး​ပြု​နည်း ​ကို ​သီး​သန့် Ebook ​လုပ်​ပြီး ​မျှေ​ဝ​သွား​ပါ​မယ်။ ​အ​ကြမ်း​မျဉ်း ​ဒီ​က​နေ ​ပြော​လိုက်​ပါ့​မယ်။
​ပ​ထ​မ​ဆုံး Browser ​ကို ​ဖွင့်​ပါ။ ​ပြီး​လျှင် Search Engine address ​ကို Browser ​ရဲ့ Address Bar​မှာ ​ရိုက်​ထည့်​ပါ။ ​ပြီး​လျှင် Search Box ​ထဲ​တွင် ​မိ​မိ​လို​ချင်​သော ​စာ(​ဥ​ပ​မာ- computer knowledge)၊ ​သီ​ချင်း(​ဂျက်​ဆင်​ထိပ်​က​လ​ရိပ်​ပြာ)၊ ​ပုံ(Diana)၊ ​ဗီ​ဒီ​ယို(MrBean)၊ Software (Microsoft Security Essential Full Version Free Download) ​စ​သည့်​ဖြင့် (​ကွင်း​ထဲ​ရှိ​စာ​သား​များ ​အ​စား ​မိ​မိ​နှစ်​သက်​ရာ​ကို ​ရေး​နိုင်​သည်) ​ရိုက်​ပြီး Enter ​သာ ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ​အ​နီး​စပ်​ဆုံး​လင့်​တွေ ​ကျ​လာ​ရင် ​ရွေး​ချယ်​ပြီး ​လင့်​ကို​နှိပ်​ပြီး ​ရှာ​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​ဒီ​လောက်​ဆို​ရင် Search Engine ​အ​ကြောင်း ​နည်း​နည်း​လောက်​တော့ ​သိ​သွား​လောက်​ပြီး။ ​အောက်​မှာ Search Engine ​တွေ​ကို ​လက်​လှမ်း​မှီ​သ​လောက်​လေး ​မျှေ​ပး​ထား​ပါ​တယ်။
Search Engine Addresses
www.google.co.uk/ (Bold ​လုပ်​ထား​တာ ​မ​မိုး​နှစ်​သက်​လို့​နော်)
​အ​များ​ကြီး​ရှိ​သေး​တယ်​နော် ​အ​သေး​စိတ်​တွေ​ကို ​ဖြည်း​ဖြည်း​ချင်း ​ရေး​သွား​ပါ့​မယ်။
Email ​အ​ရှည်​က​တော့ Electronic Mail ​ခေတ်​တွေ ​စ​နစ်​တွေ​ပြောင်း​လာ​တော့ ​ယ​ခင် ​စာ​တိုက်​များ​မှ ​စာ​ပို့​ကြ​ရာ​မှ ​နည်း​ပ​ညာ​အ​ကျိုး​ကြောင့် ​တ​မြို့​နဲ့ ​တ​မြို့၊ ​တ​နိုင်​ငံ​နဲ့ ​တ​နိုင်​ငံ ​စ​က္ကန့်​ပိုင်း၊ ​မိ​နစ်​ပိုင်း​အ​တွင်း ​စာ​ပို့​ဆက်​သွယ်​လို့​ရ​လို့ ​က​မ္ဘာ​ကြီး​က ​ရွာ​တ​ရွာ​လို့​တောင် ​တင်​စား​လာ​ကြ​တာ​ပေါ့။ ​လျှပ်​စစ်​နည်း​ပ​ညာ​ကို​သုံး​ပြီး ​စာ​ပို့​နိုင်​လို့ Email ​လို့ ​ခေါ်​ကြ​တာ​ပေါ့။ Mail Server ​အ​များ​ကြီး​ရှိ​တဲ့​ထဲ​က ​အ​ချို့​ကို ​မ​မိုး ​ရေး​ပေး​သွား​ပါ​မယ်။
1) Gmail (www.gmail.com) (Free Mail)
2) Yahoo Mail (mail.yahoo.com) (Free Mail)
3) Hot Mail (www.htomail.com) (Free Mail)
4) Microsoft Mail (mail.live.com) (Free Mail)
5) mail4u (www.mail4u.com.mm) (Paid Mail - ​အ​ခ​ကျေး​ငွေ​ဖြင့်) ...
Email Account ​ဖွင့်​နည်း​တွေ​က ​တ​ခု​နဲ့​တ​ခု​သိပ်​မ​ကွာ​ပါ​ဘူး။ ​ကြိုး​စား​ပြီး​ဖွင့်​ကြည့်​ပါ။ ​တ​ချို့ Email ​တွေ​က ​ဖုန်း​နံ​ပါတ်​တောင်း​တာ​က​လွဲ​ရင်​ပေါ့။ ​ဘယ်​အ​ရာ​ကို​မ​ဆို ​မိ​မိ​ကိုယ်​တိုင် ​ကြိုး​စား​စေ​ချင်​တယ်။ ​ကိုယ်​တိုင်​ရှာ​တွေ့​တဲ့​အ​ရာ​က ​ပို​ပြီး ​အ​နှစ်​သာ​ရ​ရှိ​လို့​ပါ။
Email address ​တ​ခု​ကို ​လေ့​လာ​ကြည့်​ရ​အောင်​နော် ...
Email address ​တ​ခု​မှာ - user name
- @ (at ​ဟု​အ​သံ​ထွက်​ရန်)
- Top Level Domain Name
- Second Level Domain Name (Mail Server) ​ဆို​ပြီး (၄)​ပိုင်း​တွေ့​နိုင်​ပါ​တယ်။
- user name = moepcservice
- Second Level Domain Name (mail server) = gmail
- Top Level Domain Name = com